को लेखा बिल 62 को नियन्त्रणको लागि प्रयोग गरिन्छ खरीदार र ग्राहकहरु संग गणना। यो रजिस्टर ग्राहक द्वारा ल्याए सबै कागजात लागि विश्लेषणात्मक लेखा, साथै आगमन भुक्तानी को नियन्त्रण सञ्चालन लागि सिर्जना गरिएको थियो।
रजिस्ट्री मा, 62 को एक स्कोर काम पूर्णतया सकेसम्म लेखापाल सबै ग्राहक डाटा झल्काउँछ। यो दृष्टिकोण तेजी विश्लेषणका लागि अनुमति दिन्छ:
करार अन्तर्गत भुक्तानी सर्तहरू;
नियन्त्रण उजागर साधन मा लेट भुक्तानी;
भविष्यमा सेवाहरूको खातामा प्राप्त अग्रिम जम्मा;
जसको लागि कुनै भुक्तानी अवधि आएको छ बिल ट्रयाक राख्न;
प्राप्त बाँकी promissory टिप्पणीहरू निगरानी।
मा शेयर उप-खाताहरू इनभ्वाइसहरू प्रदान गर्दैन योजना मा 62 स्कोर, त्यसैले मुन स्वतन्त्र आफ्नो संगठनको लागि विश्लेषण, सुविधाजनक लागू हुन्छ। यो अलग आवश्यक कम्पनी को लेखा नीति प्रतिबिम्बित।
खुद्रा CQ प्रयोग गर्न सकिन्छ। 62 विश्लेषण बिना
उप-खातामा टूटने बिना Vesti 62 स्कोर मार्फत नगद रजिस्टर नगद मा माल को लागि खुद्रा व्यापार र प्राप्त भुक्तानीमा संलग्न कम्पनीहरु गर्न सुविधाजनक छ। खुदरा खरीदार मा डाटा रुचि छैन र उसलाई दीर्घकालीन अनुबंध गर्न। अक्सर, सबै खरीदारों भनिन्छ एक subkonto मा प्राप्त "निजी व्यक्ति।"
रिटेलर को installment योजनामा कुराहरू बेच, उधारो नागरिक (छैन बैंकहरू) अवस्था, अक्सर ऋण मा repayments को जटिल ट्रयाकिङ रूपमा यस्तो समस्या सामना गर्दै हुनुहुन्छ। यस्तो अवस्थामा साधारण श्रृंखला भंडार महंगा उपकरण बेच गिरावट। साथै, निगरानी गर्न आवश्यक छ अग्रिम माल लागि पूर्व-भुक्तानी को मामला मा। तसर्थ, यी ग्राहकहरु को सन्दर्भ मा एक उप-खाता सञ्चालन गर्न राम्रो हुनेछ।
यो विशिष्ट बिक्रेताहरू वा प्रबन्धकलाई गाँसिएको खाता को व्यवस्थापन चोरी विरुद्ध लड्न मदत र अर्डर सही कार्यान्वयन अनुगमन गर्न सक्छ भन्ने टिप्पण लायक छ। खाता किनमेल वा सामान लागि भुक्तानी गर्दा सामाग्री व्यक्ति एक भूल प्रतिबद्ध देखाउन हुनेछ।
थोक व्यापार मा उप-खाताहरू लागि आवश्यकता
थोक र गैर-नगद व्यापार मा मामला छैन। 62 खाता सम्झौता गर्न प्रत्येक counterparty को सन्दर्भ मा सञ्चालन गरिएको छ। ग्राहकहरु फरक नियम र सर्तहरू संग धेरै सम्झौताहरू प्रवेश गर्दा यो विशेष गरी महत्त्वपूर्ण छ।
subaccounts प्रयोग एकदम समय खपत लेखा बन्नेछ। 62 स्कोर nomenclature प्राप्त, तर सुविधाजनक र विश्वसनीय लेखा के जस्ता कार्यहरू जायज छन्। यस्तो व्यवस्थापन रिपोर्टिङ पनि कुनै प्रश्न कर प्रतिबन्ध को मामला मा सजिला छ। अधिकतम पारदर्शिता गणना सधैं प्रोत्साहन छ।
62 शेष: पोस्टिङ
ग्राहकहरु गरिएका सबै प्रतिबद्धता सधैं realizable को खाताहरूमा कटौती गर्दै (t- घ-टी 62 90.1), र एक संवाददाता रसिद (घ-टी-51 62.1 t गर्न) संग जम्मा गरिएको छ। यी मुख्य ताराहरु छन्। प्राप्त अलग subaccounts (घ-51 मिटर, एम-62.2 गर्न) मा लिपिबद्ध छन् अग्रिम रकम।
गणना ब्याज असर promissory टिप्पणी द्वारा प्रदान गरिएको छ भने, भुक्तानीको रसिद को रूपमा कटौती छ 51 बिल, र अन्य आय र व्यय (sch.91) मा ब्याज प्राप्त।
जब शाखा संग काम 62 खाता प्रयोग
संगठन छुट्टै एकाइ ग्राहकहरु र ग्राहकहरु संग गणना र दायित्व लेखा सर्वसञ्चित ब्यालेन्स पाना, छ र हुँदा अलग्गै मा बाहिर छ।
अभिभावक संगठन को लागि सबै गणना कार्य भने छुट्टै विभाजन, यो एमएफ प्रयोग गर्न अनिवार्य छ। 79. उदाहरणका लागि, सामान र सेवाहरू "आन्तरिक गणना" खाता चार्ज र 62 (घ-टी 79, टी-62) खातामा जम्मा को बिक्री को लागि कोष। शाखा पनि थप सहज ब्यालेन्स समेकन लागि अभिभावक कम्पनी को एक समान उप-खाताहरू प्रविष्ट गर्न आवश्यक छ।
अवधारणा र अडिट कार्य, निश्चित सम्पत्ति को अडिट को सार
लेखापाल लागि श्रम सुरक्षा विशिष्ट निर्देशन
शेष - आय र व्यय बीच फरक
हात मा हराइरहेको मिली गर्न सकिन्छ: पोस्टिङ। अतिरिक्त र कमी कसरी प्रतिबिम्बित गर्न
आवेदन र समीक्षा: अनुहार मा एस्पिरिन मुखासे
कसरी बच्चा को बनाउनसमेत वा के गर्भवती गर्न छैन
एरिक Lindros - को प्रतिभाशाली स्ट्राइकर, जीत देख
पहिलो व्यक्ति Shooters - यो खेल उद्योग मा सबै भन्दा लोकप्रिय विधा
कसरी कपाल राख्न Naroscheny? बाल विस्तार: कसरी हेरचाह गर्न र सुधार
टैटू। सेल्टिक ढाँचाहरू र आफ्नो अर्थ
Marwa Ohanyan: सुन Naturopathy व्यञ्जन
"सबै राम्रो छ" - विज्ञान, 38 (सेन्ट पीटर्सबर्ग) मा पट्टी: विवरण, समीक्षा